Ndeipi nzira yakarurama yokunyora bhulo remashoko ekudzokera shure?
Zvizhinji zvinowanzoitika, kana zvasvika pakutsvaga kweSearch Engine Optimization (SEO) panguva yakareba, vanhu vakawanda vanovhiringidzika kana zvichida kunyange kuvhiringidzika nekugadzira sound backlink profile yewebsite yavo kana blog. Asi chinetso chii? Chinhu ichi ndechokuti kuvaka backlinks nekuwana - ndezvezvinhu zviviri zvakasiyana. Kuvaka backlinks kunoreva kusika kana kuatenga chete nokuda kweZOO zvinangwa. Pakupedzisira - iwe unovada kuti uzviwanire pakati pezvinhu gumi zvekutsvaga paGoogle - component temperature control. Kune rumwe rutivi, kunyange zvakadaro, kugamuchira backlink kunoreva kuti iwe unofanirwa ivo. Kuisa imwe nguva nekushingaira mukunyora bhuti rakanaka remashoko re backlink ndizvo chaizvo zvinomirira kuwana izvo zvakakodzera. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogadzirisa sei bhaibheri rechokwadi remashoko ekutevedza kunoshanda zvakakosha kuti uwedzere SEO kuedza kwako. Saka chii chinoita kuti "blog" yakarondedzere iyo inogona "kuwana" iwe seHQ akawanda backlinks ne High PageRank sezvinobvira? Ngationei!
Asi tisati tatanga, ngatitarisei - kutora backlinks zvinoreva kuti unofanira kushandiswa zvakanyanya-centric. Kubva pane maonero e SEO, kana iwe uchiita kuti user afare, iwe unofadza Google search engine zvakare. Ndinoreva kuti hapana chikonzero chekushandisa nguva yakawanda kutsvaga chero zvipi zvayo kana mazano okubiridzira kana kushandiswa ne-main search algorithm. Ndinoshuva kuti ndinogona kutora nguva yangu zvakare, asi iwe zviri nani kuitora zvishoma - kana uchida kuvaka bhizimusi chaiyo inobhadhara mari chaiye, unofanira kufungidzira kuedza kwako pakufadza mutengi. Kutaura zvazviri, kuita kuti zvose zvifadze pane imwe nguva zvingaita kuti mumwe nomumwe wavo ave muvabatsiri vako vaduku mukutengesa - vashandi vanofara vari kukuwana iwe zvakanyanya kumashure, kugovera zvaunenge uchiita paWebhu, uye vanowanzogona kudzoka uye kuva yako chaiyo vatengi shure kwezvose.
Kudzokera kumucheto - ndeipi nzira yakarurama yekuva nehupenyu bhuti remashoko ekudzokera shure - regai ndiratidzei nzira iri pamwero. Hezvino izvo zvaunoda kuita:
Ita yako yese SEO campaign inofambisa kumativi ose kumushandi chete - kutanga uye mberi. Zvose zvaunoda kuyeuka ndezvokuti Google inoona backlink imwe neimwe se "vhoti. "Nzira iyo, yose yaunoda pano ndeyokuwedzera mavhoti" mavhoti "kuitira kuti rimwe nerimwe rakasiyana nehuwandu blog rebacklink rive rakakosha chaizvo.
Funga nezvehutano, kwete huwandu
Hapana chikonzero chekuti zvinhu zvose zvinofanira kuitwa muhupenyu, pasina kumhanyira kunze kuti zvive nezvikamu zvakawanda sezvinobvira. Kana zvisina kudaro, kuita kwose kwaizoshandurwa neGoogle se spam kana kuti mamwe marudzi ekunyengera. Nenzira iyo, yeuka - kuregerera hakubvumirwi pano, sezvo kunyange bhuku rimwechete rebhuku remashoko ekudzokera shure kune dzimwe nzvimbo paInternet zvinogona kukuvadza kusarudza kwako.
Ita Zvaunofunga Zvichengetedze
Sezvandambotaura kare, kuumba yakawanda yemarara yakasvibiswa hakuzombokuwani chero kupi zvako. Ndinoreva kuti nzira chete yekuita kuti webhusaiti yako kana bhulogi ikure ndeyekutungamirira uye kuramba uri kunze kwemakwikwi. Tichifunga nezve "blog" yako remashoko ekudzokera shure, ndinokukurudzira kuti uve nechokwadi chokuti hauna mhinduro dzisina kufanirwa kana dzisina nguva.Nenzira iyo, usanonoka kugadzirisa zvakakwana kutsvakurudza kwedhesi nguva dzose iwe uri kutaura kuitira kuti irege kumbova nekushayikwa kweunhu kana kusakwana kwakadzika. Uyewo, iwe unofanira kunge uchigadzira uye unogara uchida kuita zvinhu zvisingatauriki nevamwe (kusanganisira vokwikwidzi vako chaivo uye niche vaipikisana).
Pashure pezvose, usakanganwa kufunga dzimwe nzira dzehupenyu hwako huchaparadzanisa kunze kwebhulogi ruduku. Ndinoreva kuti kune zvimwe zvakawanda zvingasarudzwa kuti uwane hukama, zvakadai sekunyora guest articles uye zvinyorwa dzimwe nguva, kana kunyange mukati mehuwandu hwemamiriro ako.